Home Wararka Mooshinka kalsooni kala noqoshada MW Farmaajo ee la gudbiyay (Akhriso)
Mooshinka kalsooni kala noqoshada MW Farmaajo ee la gudbiyay (Akhriso)
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa goor dhow qabtay Mooshin ka dhan ah Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Mooshinkan oi ah mid xil ka qaadis ah ayaa la saaray shaabadda Xafiiska Guddoomiyaha Golaha shacabka ee galka Xafiiska, taasoo ka dhigeysa in sharci ahaan Mooshinka inuu maray habraaciisa.
Mooshinka Xilka-qaadista ayaa lagu soo bandhigay qodobo dastuuri ah oo lagu eedeeyay Farmaajo inuu jebiyay, kuwaasoo kala ah;
Illaa iyo hadda lama oga tirada rasmiga ah ee Mooshinka ka geysay Madaxweynaha, hase ahaate Madaxweynaha ayaa waxaa mooshin ka keeni kara 92 Xildhibaan oo ah saddex meel hal meel.
Previous articleTaariikh: MW Farmaajo oo noqday MW ugu horeeyay oo mooshin baarlamaanka ka qabto
Next articleGud. K/X Bangiga Dhexe oo sheegaty in lacagaha laga bixiyo bangiga in shacabka lala wadaago
RW Rooble oo u yeeray Wasiirada ku simayaasha ah – Sabab?
Axmed Madoobe oo si toos ah ula hadlay RW Rooble. “Ma...